Ny raharaha emoji mate sy ny maha-zavadehibe izany ho an’i Amerika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, 日本語, Português, عربي, Esperanto , English
Ny emoji mate emoji araka izay atolotry ny vondrona Arzantiniana iray amin'ny Unicode. Sary nampiasaina tao amin'ny antontan-kevitra nametrahana ny tolotra ary navoaka eto indray rehefa nahazoana alalana.
Rehefa mitsidika an'i Orogoay ianao, dia tahaka ny hoe ny zavatra voalohany voamarikao dia ny fitondran'ny olona manodidina ity kaopy hafahafa ity any amin'izay alehany mandritra ny andro. Any Arzantina, mety hisy ny hanolotra zava-pisotro ho anao avy amin'io kaopy io rehefa mamangy olona ianao. Toy izany ihany koa ny marina any amin'ny trano maro any atsimon'i Brezila. Ny rano fisotro avy ao dia mate, rano nampangotrahana niaraka tamin'ny ravina yerba mate.
Ny fisotroana mate dia fomba nentim-paharazan'ny vahoaka tompotany Guarani sy Kaingang efa an'arivony taona talohan'ny vanim-potoana kristiana. Ankehitriny ilay fomba efa mieli-patranao manerana an'i Amerika Atsimo, tafiditra amin'izay i Shily sy i Paragoay, ary toy izany ihany koa raha miampita an'i Atlantika any amin'ny firenena toa an'i Alemaina, Libanona ary Syria (izay mpanafatra yerba mate avy any Arzantina lehibe indrindra eto ambonin'ny tany). Ny famaky azy moa dia [ˈmate] amin'ny teny espaniola ary [ˈmatʃi] amin'ny teny paortiogey ary atolotra amin'ny kaopy manokana, vita amin'ny hazo hatrany, ary sotroina amin'ny mololo volafotsy.
Ny nanafintohina, tsy misy ny emoji mampiseho ity zava-pisotro ankafizin'olona an-tapitrisany ity, saingy misy ny olona sasantsasany miezaka manao zavatra hisian'izany. Tamin'ny Septambra 2017, Arzantiniana dimy nivory tao amin'ny Media Party, lanonana fanaon'ny mpisovoka isan-taona ao Buenos Aires, no nampakatra ny vozon'akanjony hanao ny emoji mate voalohany indrindra eto ambonin'ny tany.
“Nanao ny endrika voalohany indrindra tamin'ilay ravaka sy ny fikarohana hanao ny tolotra izahay. Avy eo, nanohy ny asa avy tamin'io izahay”, hoy i Santiago Nasra, mpanao gazety an-dahatsary, mpikambana ao amin'ny vondrona mitolona amin'ny hampisiana ny emojimate, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny imailaka.
Tamin'ny voalohany ny ekipa nihevitra hanao ireo tsiro arzanitiana hafa, toy ny “choripán” (mofo sy saosisy) na “asado,” kiendiendy nentim-paharazana, dia tapa-kevitra ry zareo tany amin'ny farany fa ny emoji mate no mahasolotena kokoa ny kolontsaina mahahoatra an'i Arzantina.
“Rehefa tsy vokatra manokana ny mate, fa tsirinkevitra mahasahana ny tontolo izay noraisina sy nampanaraham-bolontany tany amin'ny kolontsaina maro isan-karazany, dia mendrika ny hanana emoji izany,” hoy i Santiago.
Tamin'ny volana mey, nofantenin'ny Unicode Consortium, izay misahana ny fenitra emoji, ho ao amin'ny andiany mivoaka amin'ny 2019 ny amoji mate. Tontosa izany dingana lehibe izany noho i Santiago sy ny vondrona Arzantiniana, izay nanolotra ny raharaha tamin'ilay tsy-mitady-tombotsoa tao anaty antonta-kevitra 40 pejy.
Ao anatin'ny zavatra tantaraina ny fanomezana antsipiriany ny vokatsoa ara-pahasalamana amin'ny fisotroana isan'andro ny mate verba sy ny lisitry ny firenena manafatra azy (113 tamin'ny taona 2016). Tafiditra ao ihany koa ny sarin'ireo olo-malaza eo am-pankafizana ny zava-pisotro — toy ny Papa Fransoà, Papa Joany Paoly II, ny filohan'i Etazonia teo aloha Barack Obama, ny kintan'ny baolina fandaka iraisampirenena Leonel Messi, Luis Suárez, ary Antoni Griezman — ary ireo sehatra avy amin'ny sarimihetsika tahaka ny Captain Fantastic ary ny andian-tsarimihetsiky ny Amazon Prime Mozart in the Jungle izay mitelina izany ny mpandray anjara ao anatiny.
Araka ny fehiny voasoratra ao amin'ny antonta-kevitra:
Tsy ho dia tena hoe ana vondron'olona manokana ny emoji mate, fa mirona kokoa mankany amin'ny ankapobeny, satria tsy ny andiany mate avy any Amerika Latina ihany no ampiasàna azy, fa misy koa ireo Arabo sy Aziatika mpisotro yerba mate. Ny volavolan'endrika dia hampiditra ny “mate” ho fanehoana ny fampifangaroana ny ahitra sy ny rano (mafana na mangatsiaka) ary ilay fitaovana fisotroana. Farafaharatsiny tsy manokana toy ny fisotro na sakafom-poko (toy ny sake) izay efa hita ao amin'ny tondro emoji, anisan'izany ny sakafo Meksikana, Italiana ary Japoney. Efa nasehonay tamin'ny Breziliana, Paragoayana, Alemà, Syriana ary Orogoaiana izao tolo-kevitra izao. Takatr'izy rehetra fa ny mahazava-dehibe ny mate tao amin'ny volavola napetrakay ary hampiasa izany ry zareo eo ankilan'ny fahasamihafana mety ho hita amin'ny kaopy mahazatra ny faritra tsirairay avy.
Tamin'ny Oktobra no nampisehoan'ny Unicode ny endrika navoakany, nivoaka eto ao amin'ny siokan'i Florencia Coelho, izay mpikambana ihany koa ao amin'ny ekipa nandrafitra ilay antontan-kevitra:
#emojidelmate ao amin'ny Windows 10. Endrika emoji hivoaka amin'ny taona 2019 hahalasa adala ahy!
Ny fanentanana antserasera hanohanana ny emoji mate moa dia mandeha amin'ny alalan'ny fihantonan-teny [tenirohy] #emojidelmate.
Araka ny nolazain'ny mpanohana azy, ny emoji mate no tarehintsary voalohany avy any Amerika Atsimo izay manao ny lalany mankany amin'ny kitendrin'izao tontolo izao, fa tsy ho izy mihitsy no fikasana voalohany avy any amin'ny faritra. Hatramin'ny taona 2017, Profesora Breziliana miisa roa no niezaka nandresy lahatra ny Unicode hampiditra ny capybara, biby mampinono teratany Amerika Atsimo, ao amin'ny sokajim-bibin'ny emoji.
Amin'izao fitomboan-dazan'ny emoji tao anatin'ny taona vitsivitsy izao, dia tsy mbola nazoto tahaka izany ny olona hosoloan'ireny teny. Ohatra amin'ny emojis nampidirina tao amin'ny rakibolana ny fianakaviana ahitana ray sy ray na reny sy reny sy ireo endrika samy hafa loko. Ho an'ny mpanohana ny emoji mate, fangatahana mizotra mankany amin'ny fimaroana ihany koa ny azy ireo:
Mahahoatra ny fisotro rehetra ny mate, satria manana dika ara-kolontsaina feno (ankoatra ny soa ara-pahasalamana maro azo avy aminy). (…) Manana dika sy manandanja loatra ny mate ka tokony hisy emoji hisolotena azy. Izao no fotoana hahazoany vintana tsara hifalian'ny mpiondana avy any Amerika Latina sy manerana izao tontolo izao.
Hamoaka ny fantina faharoa ny Unicode amin'ny febroary 2019 ary ny tafiditra famaranana amin'ny Jona 2019. tsy isalasalàna fa ho arahin'ny mpiondana emoji mate akaiky ny fanambaràna hivoaka amin'izany.